ဆုံးပါးသွားတဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့(၆၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ရည်စူးပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Russell – Nyi Ma Lay
ဆုံးပါးသွားတဲ့ မိခင်ကြီးရဲ့(၆၈) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အတွက်ရည်စူးပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Russell
By Ko AyePosted on March 28, 2022
ပရိသတ်ကြီး ရေ Russell ကတော့ ည ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပရိသတ် တွေ ရင်ထဲ နေရာ ယူခဲ့ သူပါ။ အိပ်မက်ဆုံရာ သီချင်းပြိုင်ပွဲ ကလည်း သူ့အတွက် အနုပညာ ခြေလှမ်း တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ နောက်ပိုင်း မှာလည်း MC အနေနဲ့ လည်း မကြာမကြာ ပွဲတွေမှာ မြင်တွေ့ ရလေ့ ရှိသူပါ။
မကြာသေးခင်က မိခင်ကြီး ရုတ်တရက် ဆုံးပါး သွားမှု‌ေကြာင့် ဖြေမဆည် နိုင်အောင် ဖြစ်ခဲ့ ရတဲ့ သူပါ။ လက်ရှိ မှာလည်း” မနက်ဖြန် ၂၈.၃.၂၂ မှာ ကျရောက်မယ့် ၆၈ နှစ်ပြည့် ကွယ်လွန်သွားသော မွေးနေ့ ရှင် ဦးဇင်း မိခင် ဒေါ်ခင်မာလာထွန်း အား ရည်စူး ၍ ဘုန်းကြီး ဝတ်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် …. ယခု ပြု ရသော ကုသိုလ်အား
တမ္မာန်လွန် မှ မိခင် ဒေါ်ခင်မာလာထွန်း ရရှိ နိုင်ပါစေ 🙏”ဆိုတဲ့ စာလေးနဲ့ ပြောပြ ခဲ့တာပါ။
ပရိသတ်တွေလည်း Russell မိခင် ကြီးအတွက် သာဓု ခေါ်ကာ ကုသိုလ်လေးတွေ မျှဝေ ပေးခဲ့ ပါဦးနော်။
ပရိသတ္ႀကီး ေရ Russell ကေတာ့ ည ႐ုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားႀကီးနဲ႔ ပရိသတ္ ေတြ ရင္ထဲ ေနရာ ယူခဲ့ သူပါ။ အိပ္မက္ဆုံရာ သီခ်င္းၿပိဳင္ပြဲ ကလည္း သူ႔အတြက္ အႏုပညာ ေျခလွမ္း တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ပိုင္း မွာလည္း MC အေနနဲ႔ လည္း မၾကာမၾကာ ပြဲေတြမွာ ျမင္ေတြ႕ ရေလ့ ရွိသူပါ။
မၾကာေသးခင္က မိခင္ႀကီး ႐ုတ္တရက္ ဆုံးပါး သြားမႈ‌ေၾကာင့္ ေျဖမဆည္ နိုင္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ ရတဲ့ သူပါ။ လက္ရွိ မွာလည္း” မနက္ျဖန္ ၂၈.၃.၂၂ မွာ က်ေရာက္မယ့္ ၆၈ ႏွစ္ျပည့္ ကြယ္လြန္သြားေသာ ေမြးေန႔ ရွင္ ဦးဇင္း မိခင္ ေဒၚခင္မာလာထြန္း အား ရည္စူး ၍ ဘုန္းႀကီး ဝတ္ျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္ …. ယခု ျပဳ ရေသာ ကုသိုလ္အား
တမၼာန္လြန္ မွ မိခင္ ေဒၚခင္မာလာထြန္း ရရွိ နိုင္ပါေစ 🙏”ဆိုတဲ့ စာေလးနဲ႔ ေျပာၿပ ခဲ့တာပါ။
ပရိသတ္ေတြလည္း Russell မိခင္ ႀကီးအတြက္ သာဓု ေခၚကာ ကုသိုလ္ေလးေတြ မၽွေဝ ေပးခဲ့ ပါဦးေနာ္။
Previous post ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပြည်သူ့အချစ်တော်မင်းသမီးလေးမြနှင်းရည်လွင်ရဲ့ ငယ်ဘဝ ပုံရိပ်များ
Next post စကစကို အပြည့်အဝထောက်ခံခဲ့ပေမဲ့ လူမှုထူးချွန်ဆုမှာ သူ့နာမည်မပါလို့ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ရွှေရူပါဦးကို ပညာသားပါပါနဲ့ ထိမိအောင်ပြောချလိုက်တဲ့ ရန်ရန်ချမ်း